Ubufakazi - I-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Kusukela u-Ouzhan aqala ukuhweba emhlabeni wonke, siphumelele ukuthandwa ngamakhasimende amaningi:
Ngeneliseke kakhulu ngomsebenzi ka-ouzhan. Ukuhlinzekwa kwamakhasimende kuyashesha futhi uGaby wenze umsebenzi omangalisayo ezingxenyeni zami. Ngikubheke ngabomvu ukusebenza no-Ouzhan futhi!
Ukuphenduka okusheshayo nomkhiqizo wekhwalithi owenzelwe i-spec. Angikwazi ukucela okungaphezu kwalokho. U-Ouzhan ungumlingani omuhle!
Izingxenye zenziwe ngokusebenzisa amamodeli we-3D. Ngesikhathi kuxoxwa nge-oda, onjiniyela babenake kakhulu futhi bangisiza ekutholeni amaphutha ami ukuze ngikwazi ukuwalungisa. Yenziwe ikhwalithi ephezulu. Ukuthunyelwa kulandelwe. Ingxenye ngayinye ibipakishwe kahle, ngokuhlukile kwezinye kwifilimu yama-foam enezendlalelo eziningi. Ngijabule ngomhlinzeki. IMenenja uChandler ibithinta, iphendula imibuzo ngosuku olufanayo. Ngiyethemba ukuqhubeka nokubambisana kwethu.
Lesi sitolo se-CNC siyazamazama! Ngijabule kakhulu ngenkonzo futhi manje njengoba nginomngani ongisizayo ngama-oda ami kwenza konke kube lula kakhulu. Ngifaka ama-oda amaningi manje, insiza esheshayo futhi enobungane kakhulu. Cela iRio muhle ukusebenza naye!
Insiza enhle kakhulu kuyo yonke inqubo. Ukuxhumana okusheshayo nge-imeyili kanye newhatsapp kudingidwa konke esikudingayo nemininingwane namasampula kunikezwe ngqo kwimidwebo yethu esezingeni eliphakeme kakhulu nokuqeda. Silangazelele ukusebenza no-Ouzhan ngokuzayo kulokho esikholelwa ukuthi kuzoba ubudlelwano besikhathi eside kuyo yonke imikhiqizo eminingi kuphothifoliyo yethu.